Ngathi | Inkampani Yunke China Information Technology Limited isekelwe kwi-Jemani
Malunga neDijithali yaseTshayina (Inkampani yomzali) yeQela
I-Digital China (inkampani yabazali) Group Co., Ltd. (ikhowudi yesitokhwe: 000034.SZ).
Kule minyaka ingama-20 idlulileyo sibonile sikhokela kwiinkonzo ezihlangeneyo kulo lonke elase China. Nge-eco-system egubungela ngaphezulu kwamaqabane angama-30,000, sinikezele ngezigidi zamashishini kunye namakhulu ezigidi zabathengi ngeemveliso ze-IT, izisombululo kunye neenkonzo.
Ngexesha "lefu + ledatha enkulu", siya kuhlala sinyanisekile kwimishini yethu, sakhe ngamandla kwaye sizame ukuba ngumboneleli ngenkonzo yelifu ophambili kunye nomboneleli wenguqu kwishishini.
Malunga neqela ledijithali lase China (inkampani yabazali)
Yunke China Information Technology Limited (Igama langaphambili njenge DIGITAL CHINA (Inkampani yabazali) INETWORKS LIMITED, DCN ngokufutshane), njengenkampani yeDijithali yaseTshayina (Inkampani yabazali) Iqela (Ikhowudi yeStock: SZ000034), sisixhobo sonxibelelwano esineenkcukacha eziphambili kunye nomnikezeli wesisombululo. Ukusuka eLenovo, iDCN yasungulwa kwintengiso yenethiwekhi kwi1997 nefilosofi yenkampani "ejolise kubathengi, eqhutywa ziTekhnoloji kunye nokukhethwa kweNkonzo".
I-DCN igxile kwicandelo lonxibelelwano lwedatha enemigca epheleleyo yemveliso, kubandakanya iTshintsho, i-Wireless, iRouter, uKhuseleko kunye neenkonzo zeLifu. Ngokuqhubeka nokutyala imali kwi-RD, i-DCN ngumboneleli ophambili wesisombululo se-IPv6, inkampani yokuqala yaseTshayina iphumelele isatifikethi se-IPv6 Ready Gold kwaye umenzi wokuqala waphumelela iSatifikethi se-OpenFlow v1.3.
I-DCN sele ibonelele ngemveliso kunye nezisombululo kuwo onke amaphondo amaTshayina nakumazwe angaphezu kwama-50 kwihlabathi liphela, esekwe ukuthengisa kunye neziko lenkonzo eYurophu, eMelika, eRashiya, kwiCIS, kuMazantsi mpuma eAsia nakwimimandla ekuMbindi Mpuma. I-DCN isebenzela abathengi ngempumelelo kwiMfundo, uRhulumente, abaSebenzi, i-ISP, iMikhosi, kunye namaShishini.